Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda | WWW.DARARWEYNE.TK
Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda
Jimce wanaagsan akhristayaasha sharafta leh meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaatoyda oo aad maalin walba kala socotaan shabakada laacib.net
Xanta ay wargeysyada yurub ka qoreen suuqa kala iibsiga waxaa inaga caawisa shabakada Tv-ga Eurosport oo soo uruurisa maalin walba. Aan ku horeyno England.
MANCHESTER CITY: Weeraryahanka kooxda Manchester City Carlos Tevez ayaa la arkay isagoo la hadlaya madaxa farsamada kooxda Inter Milan Marco Branca, taasoo sii kicineysa wararka sheegaya in Tevez uu ku sii jeedo San Siro xagaagan. Wargeyska Daily Telegraph ayaa sawir ka soo qaaday Carlos Tevez iyo Marco Branca oo isku gacan qaadaya jasiirada Sardinia oo uu Tevez fasax ku joogo. (Daily Telegraph).
ARSENAL: Kooxda Arsenal ayaa loo sheegay inay bixiso ku dhawaad 18 milyan oo ginni hadii ay doonayaan inay la soo wareegaan daafaca dhexe ee kooxda Everton Phil Jagielka. Sidaasi waxaa daabacday wargeyska London ka soo baxa ee (Metro).
Kooxda Gunners ayaa kor u qaadi doonta dhamaadka todobaadkan dalabkeeda 5ta Milyan oo kaashka oo uu la socda 5 milyan oo oo dheeri ah oo ay ku doonayaan Alex Oxlade-Chamberlain oo u ciyara kooxda Southamton. Sidaasi waxaa qortay wargeyska (Daily Mail)
LIVERPOOL: Kooxda Liverpool ayaa xiiseyneyso inay la soo wareegto daafaca bidix ee kooxda Hamburg Marcell Jansen oo lagu qiimeeyo 10 milyan oo ginni iyo daafaca FC Porto Alvaro Pereira oo isna lagu qiimeeyo 18 milyan oo ginni. Waxaa sidaasi qortay wargeyska (Daily Mail).
Tababare Kenny Dalglish ayaa isku dayaya inuu heshiis la gaaro 16 jirka reer Peru ee daafaca ah Renato Tapia, inkastoo sharciga FIFA uu u diidayo inuu u soo wareego koox Ingariis ah ilaa uu ka gaaro 18 jir. Waxaa daabacday warkaan wargeyska (Daily Mirror)
CHELSEA: Kooxda Chelsea ayaa qarka u saaran inay la soo wareegto 19 jirka burburiyaha khadka dhexe ee kooxda Barcelona Oriol Romeu, kaasoo Barcelona ay ku dooneyso lacag 5 milyan euro ah. Waxaa warkaan daabacday wargeyska (The Independent).
AS ROMA: Kooxaha Ajax iyo Roma ayaa qarka u saaran inay heshiis ka gaaraan saxiixa goolhayaha reer Holland Maarten Stekelenburg. Waxaa sidaasi maanta daabacday wargeyska Holland ka soo baxa ee (Algemeen Dagblad)
Kooxda Roma ayaa dhinaca kale filaneysa maanta in daafaca reer Argentina Gabriel Heinze iyo weeraryahanka Barcelona Bojan Krkic ay maanta tagaan caasimada Talyaaniga, iyadoo Barca iyo Roma ay ka heshiiyeen saxiixa ciyaaryahanka. sidaasi waxaa qortay (Gazzetta dello Sport).
JUVENTUS: Waxaa soo muuqaneysa in wadahadaladii uu dhaxeeyay Juventus iyo Villarreal inay fashil ku dhow yihiin, oo ku aadanaa ciyaaryahan Giuseppe Rossi, waxaana Juve laga yabaa inay u weecato weeraryahanka Roma Mirko Vucinic Sidaasi waxa qortay Corriere dello Sport.
Kooxda Turkiga Galasaray ayaa sheegtay inay wadaxaajood kula jirto kooxda Juventus oo ku aadan sidii ay amaah ugu qaadan laheyd ciyaaryahankeeda khadka dhexe ee reer Brazil Filipe Melo. Sidaasi waxaa shaacisay (Sky Sport Italia).
NAPOLI: Kooxda Napoli ayaa dalab u gudbin doonta Fiorentina oo ku aadan laacibkooda Stevan Jovetic hadii Ezequiel Lavezzi uu ka tago, sida uu sheegay madaxweynahooda Aurelio De Laurentiis. Sidaasi waxaa qortay (Corrire dello Sport).
MILAN: Wargeyska Tuttosport ayaa qoraya in labada kooxood ee Milan ka dhisan ay doonayaan ciyaaryahanka reer Brazil ee khadka dhexe ee kooxda Sao Paulo Casemiro, halka Corriere dello Sport ay ka sheegeyso in qiimaha ciyaaryahanka uu yahay 10 milyan oo euro.
INTER: Kooxda Inter ayaa dooneysa weeraryahanka Manchester City, waxaana hadii ay waayaan ay u weecan doonaan Rodrigo Palacio oo ah weeraryahanka Genao. (Tuttosport).
Dhinaca kale Inter ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneyso daafaca kooxda Bayern Munich Breno. (Corrire dello Sport).
REAL MADRID: Iyadoo uu dhow yahay inay heshiis gaaraan Neymar iyo Real Madrid, hadana madaxda, shirkadaha xayaysiinta iyo taageerayaasha kooxda Santos ayaa bilaabay campaign ay ku codsanayaan in Neymar uu kooxda sii joogo ilaa bisha December markaasoo Santos ay ka qeyb geli doonto koobka Club World Cup. Waxaa sidaasi qortay wargeyska maalinlaha ee Madrid ka soo baxa ee (Marca).
VALENCIA: Laacibka kooxda Valecia Juan Mata ayaa hadal kor saaray hadalkii kooxdiisa ay ku sheegtay in la gaaray waqtigii la iibin lahaa. Ciyaaryahanka ayaa yiri : “Marnaba ma dhihin waxaan doonayaa inaan baxo, lakiin ma sadaalin karo mustaqbalka” Waxaa sidaasi daabacday wargeyska (Marca).
Waxaa intaas ku eg maanta oo jimce ah wararkii xanta ahaa ee ku saabsanaa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo ay qoreen wageysyada yurub kuwooda ugu waa weyn
« Ciyaaryahan Arturo Vidal Oo Tijaabada Caafimaadka U Maraya Kooxda Juventus
Kooxaha Barcelona Iyo Roma Oo Si Rasmi Ah Uga Heshiiyay Saxiixa Ciyaaryahan Bojan Krkic »